Sida loogu labisto arooska: furayaasha kaa caawin doona inaad bartilmaameedka garaacdo | Ragga Stylish
Haddii aad la yaabban tahay sida loogu labisto arooska, halkan waxaan u sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loogu guuleysto muuqaal aan fiicnayn.
Laga soo bilaabo dharka iyo jarista ilaa kabaha iyo qalabka, iyada oo loo marayo midabada ugu fiican. Soo ogow furayaasha kaa caawin doona inaad ku dhufato calaamadaha muuqaalkaaga marka xigta ee aad ka qeyb galeyso aroos.
1 Waxaan helay casuumaad aroos ... hada maxaa?
2 Sida loogu labisto arooska talaabo talaabo ah
2.1 Nooca suudka
2.2 Goynta iyo qaabka
Waxaan helay casuumaad aroos ... hada maxaa?
Marka casuumaad la helo si looga qaybgalo dhacdo, mid ka mid ah fikradaha ugu horreeya ee qof walba (haddii uusan ahayn kan ugu horreeya) wuxuu aadayaa qolka labiska. Maxaan xiranayaa Ma jiraan wax ka mid ah waxa aan ku haysto qolkayga ardeyda oo aniga ii shaqeynaya mise waa inaan u dukaameysto? Fursadaha ayaa ah, qaar ka mid ah qaybahaaga ayaa kuu shaqeyn doona, laakiin waxaad sidoo kale u baahan doontaa qaar cusub. Marka jawaabtu waxay noqoneysaa haa labada su'aalood.
La kulanida walaac yar oo la xidhiidha labiska dharka ayaa gebi ahaanba iska caadi ah, maaddaama qofna uusan jeclayn inuu isku dhaco labiskiisa, iyo in ka yar arooska ... laakiin sidee ayaad ugu labbisan tahay aroos? Waa hagaag sida kaliya ee lagu sii wadi karo ayaa ah in loo labisto qaab rasmi ah, taas oo macnaheedu yahay inaadan xiran karin jiinis, xitaa haddii ay yihiin buluug madow. Sida xarrago leh ee ay yihiin, chinos kuma haboona arooska sidoo kale. Waa inaad iska tuurtaa qaab caadi ah.
Sida la filayo, tani waxay nooga tagaysaa ikhtiyaarka kaliya. Waana taas suudku waa dharka kaliya ee kaa caawin doona inaadan isku dhicin xafladan, iyo sidoo kale in lala jaan qaado xeerka labiska ee ay aasaaseen caruusadda iyo aroosadu.
Haddii dharkaaga dharka uu maamulo in aan la dareemin maalinta oo dhan waxay ka dhigan tahay inaad si fiican wax u qabatay. Si ka duwan sida caadiga ah, marka ay timaado qaabka rasmiga ah, waxaa lagama maarmaan ah in loo istaago sifooyin khiyaano badan oo mararka qaar kaliya khabiirada ugu badan ay gartaan; tusaale ahaan, googoyn u eg gacmo gashi.
Sida loogu labisto arooska talaabo talaabo ah
Asal ahaan, waxaa jira seddex nooc oo suud ah oo aad isticmaali karto hadii lagugu casuumo aroos: suud caadi ah, tuxedo ama subax subax ah. Dhammaan waxay kuxirantahay heerka rasmiga ah ee arooska.
Midda ugu caansan ayaa ah in la xidho suud caadi ah, laakiin mararka qaarkood caruusadda iyo aroosaddu waxay dejiyaan nambarka labiska ee rasmiga ah, taas oo macnaheedu yahay inaad xirato tuxedo haddii ay tahay mid rasmi ah ama subax subax ah haddii aad doorato heerka ugu sarreeya ee rasmiga ah ee arooskaaga.
Goynta iyo qaabka
Ku saabsan jarista, sharad on silhouette a classic iyo sartorial. Nooca noocan ah ayaa kaa caawin doona inaad suudhkaagu ahaato mid aad u jilicsan ama aad u adag.
Haddii aad ka mid tahay ragga tirada badan ee noqday taageerayaasha jilicsanaanta jilicsan (taas oo ka dhigaysa suudhka si aad ugu dhow jirka isla markaana sawiraya silhouette qeexan), sidoo kale waa ikhtiyaar ku habboon. Waa arin doorbid shaqsiyeed.
Burburiyaha, ayaa ka fiican hal-naas-nuujin ka badan laba-laaban. Laakiin arooska kolba kii soo jireenka ah, waa inbadane waa inaad jirkaaga ku kala bixisaa jaakada. Jaakada caadiga ah waa tan ugu gaaban uguna subaxdii, oo leh dabada gadaasheeda, ayaa ugu dheer. Dhinaceeda, jaakada tuxedo waa meel dhexda kaga taal.
Ugu dambeyntii dooro dhar ku habboon waqtiga sanadka. Xilliga jiilaalka waxaad u baahan doontaa dhar diiran, halka xagaaga (xilliyada aroosyada badankood la xuso) waxaa lagama maarmaan ah in suudkaagu kaa caawiyo inaad kaga baxsato kuleylka tayada sida fudeydka iyo neefsashada.
Haddii aad isticmaali doontid suud caadi ah ama saddex xabbo, sharad midabada caadiga ah: buluug buluug ah, cawl iyo madow. Weligaa khalad kuma dhici doontid iyaga haddii ay ku habboon tahay munaasabadda awgeed, waxay kuu oggolaaneysaa inaad dib u isticmaasho. Arooskii ma ka dhacay dalka? Kadib xulashooyinka kale ee midabka ayaa lagu daraa kuwii hore, sida kiiska midabbada buniga ah iyo daabacaadda daabacan ee xeeldheer.
Tuxedo waa inuu noqdaa madow ama saq dhexe buluug. Hadday tahay aroos qaab tuxedo ah, caddaan ayaa loo haystaa ninka arooska ah, ha doorto inuu xidho iyo haddii kale.
Koodhka subaxa wuxuu leeyahay nambarkiisa midabka u gaarka ah: cad shaatiga, madow ama cawl jaakada iyo cawl (ama cawl iyo cawl madow) surwaalka.
Xullo la xushay
Had iyo jeer xidho kabaha dharka. Haddii aroosku ka dhacayo waddanka, waxaad isticmaali kartaa Brogues halkii aad ka isticmaali lahayd Oxford iyo Derby, maadaama ay u muuqdaan xoogaa deggan marka loo eego faahfaahintooda daloosha.
Marka ay timaado ka jawaabida su'aasha ah sida loogu labisto aroos ama dhacdo kale oo xarrago leh, talaabada ugu dambeysa ayaa loogu talagalay qalabka. Kiiskan, qalabka muhiimka ah waa xarigga, saacadda iyo square square. Waxaa lagugula talinayaa inaadan ka tanaasulin midkoodna, xitaa haddii aroosku ka dhaco dalka.
Hubso in xariggu uusan caato ahayn.Laakiin waxay leedahay ballaca caadiga ah, iyo sidoo kale in saacaddu ay ku xiran tahay inta ka hartay muuqaalka.
Haddii ay tahay aroos subax subax ah, ha iloobin inaad isticmaasho shaati laba-laab ah oo leh shaashad isku xiran. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa koofiyad sare dharkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Sida loogu labisto arooska